एमसीसीका आलोचकलाई प्रधानमन्त्रीले भने – कागले कान लग्यो भन्दैमा पछि पछि दगुर्ने ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/एमसीसीका आलोचकलाई प्रधानमन्त्रीले भने – कागले कान लग्यो भन्दैमा पछि पछि दगुर्ने ?
४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का आलोचकहरुले सम्झौता पढ्दै नपढी टिप्पणी गरेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाको बैठकमा बिहीबार बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले हल्लाकै भरमा विरोध गरेको टिप्पणी गरे ।
‘कहाँ पढ्छन्, के पढ्छन् अचम्म लाग्छ । कागले कान लग्यो भनेपछि …दुख्यो दुखेन पनि वास्ता नगर्ने छ कि छैन पनि नछाम्ने’ उनले भने ।उनले आलोचकहरुलाई एक पटक सम्झौता पढ्न आग्रह गरे । एमसीसीका विषयमा हल्लाको पछि लाग्ने र जसरी पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
‘कि विकास हुन आट्यो भन्ने चिन्ता हो ? यो यो देशमा विकासका लागि अनुदान आयो भन्ने चिन्ता हो ?’ उनले भने ।
महाकाली सन्धि ठीकै देख्छु प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले नै पछि विरोध गरेको बताएका छन् । उनले २०५३ सालमै आफूले यस सन्धिमा बबन्डर गर्नुपर्ने विषय केही नभएको टिप्पणी गरेको बताएका छन् ।
‘एक जमानामा महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा यति ठूलो बबन्डर, आँधी हुरी मच्चियो । म आश्चर्यचकित भएँ । मैले भनेँ म त त्यस्तो केही देख्दिन, यहाँ ठीकै देख्छु’ उनले भने ।भारतसँग महाकालीसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा तत्कालिन एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सहभागी भएको भन्दै भारतले ३÷४ पटक सोधेको र नेपाल पक्षले सहमति जनाएको उनले बताए ।
‘हामी सरकारका नभएका पार्टी पनि त्यहाँ उपस्थिति थियौं । हाम्रो नेतृत्व वर्ग त्यहाँ उपस्थिति थियो ।सही गरुँ त, ठीक छ, तपाईहरु प्रतिपक्षीको पनि मन्जुर छ भन्दा मञ्जुर छ’ उनले भने ‘प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा कलम समातेपछि ‘तु मे साइन करुँ’ भनेर सोधेका थिए, ह ह ठीक हे किजिए भनेपछि उनले साइन गरे ।’
त्यतिबेला ठीक छ भन्नेहरु पनि पछि बुरुक्क उफ्रिएको ओलीले टिप्पणी गरे ।देश चलाउने, नीति नियम र कानून बनाउने तहका मान्छेले देशलाई सर्वोपरी राखेर विचार गरे बोल्नुपर्ने उनले बताए ।